Ọnwụ nke Agency of Record | Martech Zone
Ihe odida ala ahụ na-akụda ụlọ ọrụ.
N’izu gara aga, agam anọla n ’oku pere mpe karịa 5 ebe atụmanya ahụ nwere ndị na-eweta ọrụ, na-ahọrọ ndị na-eweta ọrụ, ma ọ bụ nwee ụlọ ọrụ. Otu ụlọ ọrụ goro anyị ka ha bulie ogo njin ọchụchọ ha. Mgbe m nyochachara saịtị ha n'okpuru obere nkeji, m mere ka ha mata na ọ ga-abụ nnukwu ọrụ nyere CMS oge ochie ha. Ha kpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ bụ onye wuru saịtị ha maka ha ma ụlọ ọrụ ahụ nyere ha ngwa ngwa ọzọ iji kwalite na CMS ọhụrụ. Gini mere na ụlọ ọrụ ahụ emeghị ka ha mata na mbụ?
Companylọ ọrụ ọzọ mere ka anyị jiri ịdị uchu na-arụ ọrụ na ntanetị. Nsogbu ya bụ na ajụjụ ndị ha nwere adabaghị na ike ikpo okwu. Gini mere ha amaghi banyere isi ahia nke ikpo okwu? Ọ bụ oku ọkụ ọkụ ọkụ ebe ndị otu ahụ amataghị mkpa ọdịnihu ma ọ bụ akụ ha.
Anyị na-arụsi ọrụ ike maka ụlọ ọrụ ọzọ iji nyochaa ngwa SaaS nke ha na-achọ ịzụta. Companylọ ọrụ ahụ goro anyị ụgwọ n'ihi ahụmịhe anyị na ohere SaaS na ihe ọmụma banyere plethora nke ngwa na ahịa. Ha nwere ndi ahia ha na ndi oru ha - mana ha choro a ọhụrụ anya.
Anyị na-adịghị gị ahụkarị gị n'ụlọnga… ma ọ bụ otú ahụ ka m chere. Na akụkọ ntanetị kachasị ọhụrụ nke Online si eCosultancy, ha achọpụtala ihe na-eme na ụlọ ọrụ na etu ndị ahịa na-eji ha. Nsonaazụ ndị ahụ na-eju anya familiar ma mara!
A gaghi-adi kwa Mmekọrịta mmekọrịta Agency of Record - Dị ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-eme ka ihe onwunwe ha sie ike ma kụtuo ọnụ, ọ gaghị adị mkpa maka onye na-ere ahịa ịhọrọ ngalaba dijitalụ dị ka "ụlọ ọrụ ndekọ." (Nke a bụ ma e wezụga eziokwu ahụ bụ na "AOR" enwekwaghị ihe ọ pụtara dị ka ndị na-ere ahịa na-ahọrọ ịgbasa ego mgbasa ozi ha n'etiti ọtụtụ ụlọ ahịa.) Ka mgbidi dị n'etiti ọdịnala na mmekọrịta na-agbadata, a ga-amanye nkeji dijitalụ họrọ n'etiti ịgbanye onwe ha n'ime ụlọ ọrụ buru ibu ma ọ bụ maa ụlọ ọrụ ọdịnala aka maka njikwa buru ibu nke akụkọ mgbasa ozi n'otu n'otu.
Ogologo asọmpi n'etiti ụlọ ahịa ahịa dijitalụ ga-agbasapụ - A ga-enyo esemokwu n'etiti ịzụ ahịa ọdịnala na ịntanetị na ụwa ahịa zuru ụwa ọnụ. N'aka ozo, dika ndi ahia choro uzo "zuru oke" nke ahia, agha iburu agha gha agha abughi nani ndi nwoke na ndi nwanyi, kamakwa site na ndi oru PR na ulo oru dijitalụ na ndi okacha amara nke ndi mmadu.
Ọpụpụ nke Agencylọ Ọrụ ejikọtara - Ka agha ndị a na-apụta, nnukwu ụlọ ọrụ na-ejide ihe ga-achọ ibupụta akụkụ ya dị iche iche n'otu oge dịka ọ dịtụbeghị mbụ. N'ezie, ihe kpatara ụlọ ọrụ ji ejide ọtụtụ ọrụ ahịa, site na okike, na atụmatụ na ịzụrụ, na PR na ịre ahịa na itinye aka na ndụmọdụ bụ ịmịpụta mmetụta Gestalt ka ukwuu, ebe ihe niile dị karịa ngụkọta nke akụkụ ya. Ọ baghị uru ikwu, n'agbanyeghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30 na-arụ ọrụ na ihe nlereanya ahụ, ụlọ ọrụ ole na ole na-ejide onwe ha nwere ike ikwu n'ezie na ha emezuola ebumnuche a, ọ bụ ezie na ọ abatala na ọ abatala.
Si ochie akwụkwọ ọkọwa okwu, na ọhụrụ - N'oge gara aga, okwu dịka "GRPs," "mmetụta" na "clicks," bụ ihe eji atụ ụkpụrụ nke ndị na-ege ntị n'ihe gbasara iduzi mmefu na ịchọpụta ihe ịga nke ọma nke mkpọsa. Ihe dị mkpa na usoro ndị a ga-adịchaghị mkpa. Ha bụ ihe dabara adaba iji echiche nke "uru ndụ niile," "mmetụta / omume ọma" na "mmetụta" dochie ha. Ọbụnadị iji “ndị na-ege ntị” eme ihe adịla njikere maka uzuzu nke akụkọ ihe mere eme, ebe ọ bụ na ọ na-egosi ìgwè ndị na-adịghị agafe agafe. N'ime oge Internetntanetị nke "ịdabere na-aga" n'ime mgbasa ozi otu na ịrị elu nke mgbasa ozi mmekọrịta, okwu ziri ezi karị iji kọwaa ndị na-azụ ahịa ahịa chọrọ iru bụ "ndị sonyere."
Ndepụta e hotara na Akuko Mgbasa Ozi N'ịntanetị site na eConsultancy.
Nke a bụ ebe DK New MediaUto abụwo… n'ime Agencylọ Ọrụ ejikọtara oghere. Anyị abụrụla onye ntụgharị n'etiti ndị ahịa azụmaahịa na ndị na-enye ọrụ na ngwaahịa ha, ndị asọmpi ha, ndị ahịa ha, atụmanya ha, ndị na-ere ha, ụlọ ọrụ PR na ụlọ ọrụ ha. Ọ bụ oge na-atọ ụtọ maka anyị ma ọ dị mma ịhụ nkwado nke usoro azụmaahịa anyị na akụkọ a.
Ọ bụrụ na ị bụ gị n'ụlọnga - ọ bụ oge ịgbanwe Kwadobe, n'agbanyeghị otú ike ọ pụrụ ịbụ. Kwesịrị ịrụ ọrụ na ndị ọzọ na-ere ahịa ndị nwere ọpụrụiche dị iche iche… ọbụlagodi ma ọ bụrụ na e nwere overlap na deliverables. A na-emekọrịta ihe. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ - oge eruola ka ị chegharịa Agency nke Record ma rite uru dị iche iche nke ndị ọkachamara n’ebe ahụ nwere ike inyere gị aka imeri nsogbu ndị ọhụrụ media.
Tags: Oti mkpuederede
Ezi post! Nwee obi ụtọ ma kwenye na isi ihe gị.
Ọkt 3, 2012 na 9:54 AM
Ọ masịrị gị na post a Douglas. Anyị anaghị ahụ ihe ọ bụla ma ọ bụghị ihe ọma oge ọ bụla anyị ruru ụlọ ọrụ ọzọ.